कुखुरापालन व्यवसायमा लोभलाग्दो सफलता - Sankalpa Khabar
3. हरिद्वारको शाहीस्नानबाट तरंगीत काठमाडौं !
4. आज पनि हावाहुरीसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना
5. माडीबाट प्रचण्डको उदघोष, केही दिनमै केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ
6. एक हजार ९६ जनामा कोरोना पुष्टि, उपत्यकामा मात्रै ४३५ थपिए
कुखुरापालन व्यवसायमा दानादेखि चल्ला हुँदै अण्डा र मलसम्मको उत्पादन र बजारीकरणमा उनको नेतृत्वको दाउन्ने कर्पोरेट सफल भएको छ । यसअन्तर्गत किसान दाना उद्योग, दाउन्ने भेट फर्मा, दाउन्ने एग्रो, किसान एग्रो, एडभान्स पोल्ट्री रहेका छन् । कर्पोरेटको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल हुन् । विसं २०५१ मा आफ्नै काकासँग मिलेर काठमाडौंमा पोल्ट्री फार्म सुरु गरेका पोखरेलले त्यसको पाँच वर्षपछि आफूले फार्मसँगै ट्रेडिङको व्यापार सुरु गरेका थिए । दाउन्ने ट्रेडर्स नामक कम्पनीबाट उनले व्यवसाय सुरु गरे । त्यसको केही वर्षपछि विसं २०६३ मा चितवनमा उनको व्यवसाय विस्तार भयो । साझेदार थिए राजकुमार गुरुङ । पोखरेलले सम्झना गर्दै भने, “सुरुमा बुबाले काकासँगको साझेदारमा केही रकम शेयर राखिदिएको भए पनि त्यसपछिका दिनमा त्यही रकमले व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको हो ।” बुबा सुरेन्द्र र काका डा टीका पोखरेलको लगानीको साझेदारी पोल्ट्री फार्मलाई पोखरेल आफ्नो व्यवसायको सुरुवाती मान्छन् ।
गुरुङसँग साझेदारी हुँदा उनहरुले रु ५० लाख लगानी गरे । आजसम्म आइपुग्दा उनको नेतृत्वको कम्पनीमा लगानी रु दुई अर्ब ६० करोडभन्दा बढी पुगेको छ । उक्त रकममा बैंकको लगानी पनि रहेको छ । ती कम्पनीमा १ सय २० भन्दा बढी साझेदार छन् । यद्यपि पोखरेल परिवारको लगानी आधाभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसैले निर्णायक भूमिकामा रहेर पोखरेलले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । विगतलाई सम्झँदै उनी भन्छन्, “चितवनमा दाउन्ने ट्रेडर्स सुरु हुँदा तीन दिनमा एक बण्डल क्रेट मात्रै बिक्री भएको थियो ।” उनीहरुको कम्पनीले दाना र चल्ला किसानलाई दिने र किसानबाट अण्डा उठाउने गर्दथ्यो । यसै दौरानमा काठमाडौंमा अण्डा बिक्री गर्नेलाई पनि पोखरेलले साझेदार बनाउँदै ल्याए । झण्डै १० जना साझेदार पुगेपछि आफैँले दाना उद्योग खोल्ने र किसान पनि साझेदार बनाउने उनको योजना बन्यो । यसैअन्तर्गत विसं २०६८ मा किसान दाना उद्योग सञ्चालनमा आयो । यससँगै उद्योगले सुरुमा दैनिक आठ टन दाना उत्पादन गर्ने गरेकामा अहिले यस कम्पनीले दैनिक ४० टन मास दाना उत्पादन गर्दछ ।
पोखरेलको भनाइमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो मास दाना उनीहरुकै हो । त्यसो त किसान दानासँगै विसं २०७० बाट उनीहरुकै अगुवाइमा दाउन्ने भेट सुरु भयो जसले कुखुराको औषधि बिक्री व्यवसाय गर्दै आएको छ । यसबाट सस्तो मूल्यमा आफ्ना किसानले औषधि पाएको पोखरेल बताउँछन् । व्यवसाय विस्तारकै क्रममा पोखरेलको नेतृत्वको समूहले नवलपरासीको दुम्किबासस्थित विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३६ बिघा जग्गा खरिद गरेर अत्याधुनिक प्रविधिको कुखुरा फार्म सुरु गरेको छ । जर्मनी र मलेसियाको उपकरण जडित अत्याधुनिक उक्त फार्ममा हाल दुई लाख कुखुरा रहेका छन् । एक वर्षभित्रमा दुई लाख थप गरी चार लाख कुखुरा पुर्याउने उनको लक्ष्य रहेको छ । त्यसो त तीन वर्षभित्र यो सङ्ख्या आठ लाख पुर्याउने पोखरेल बताउँछन् । त्यतिबेला उनीहरुको लगानी रु चार अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । पोखरेलले भने, “विश्वकै आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याएर कम लगानीमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी हामी काम गर्दैछौँ ।” त्यहीँ प्राङ्गारिक मल उद्योग पनि उनकै कम्पनीले स्थापना गरेको छ । बजारमा मल लैजाने चरणमा कम्पनी पुगेको छ ।
पोखरेलका सबै कम्पनीमा १ सय २० हाराहारी साझेदार छन् । उनीहरु सबै कुनै न कुनै हिसाबले कम्पनीसँग व्यवसाय र रोजगारीमा जोडिएका छन् । एक सय ८० जनालाई रोजगारी दिएको कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिकामा काम गर्ने कर्मचारी अधिकांशको धेरथोर सेयर रहेको छ । पोखरेल भन्छन्, “काम गर्ने साथीहरुलाई आफूसँग रकम नभए बिना ब्याजमा कम्पनीले नै सापटी दिएर साझेदार बनाएको छु ।” रु पाँच लाखदेखि माथि आफूले सकेसम्म कर्मचारीको सेयर राख्न पाउने व्यवस्था उनको कम्पनीमा छ ।
पोखरेलले अण्डा उत्पादन गरेसँगै बजारीकरणमा पनि विशेष ध्यान पुर्याएका छन् । उनको भनाइमा अब एक वर्ष छ महिनाभित्रमा देशका ३० जिल्लामा आफ्नै बिक्री केन्द्र पुर्याइँदै छ । हालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र सुर्खेतमा बिक्री केन्द्र खुलिसकेका छन् । आफैँ उत्पादन गरेर उपभोक्ताको घर नजिकै पसलसम्म अण्डा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । हाल पोखरेलको कम्पनीमा दैनिक तीन लाख ६८ हजार ५ सय अण्डा सङ्कलन हुन्छ । सोमध्ये एक लाख ६८ हजार अण्डा आफ्नै फार्मको हो ।
पोखरेलको भनाइमा उनले नेतृत्व गरेको कम्पनी किसानको अण्डा सङ्कलन गर्ने र आफ्नै फार्मको उत्पादन गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । त्यसो त मास दानामा पनि उनको कम्पनी सबैभन्दा ठूलो हो । आफूलाई चाहिने लेयर्स चल्ला यस कम्पनीको लगानी रहेको ब्राउण्ड वर्ड ह्याचरीबाट ल्याउने गरिन्छ । क्रेट आफ्नै लगानीको चितवन ट्रे को प्रयोग हुन्छ भने औषधि आफ्नै पसल (दाउन्ने भेट) बाट प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले उत्पादन लागत कम र मुनाफा बढी हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् । कुखुरा व्यवसायमा सफल पोखरेल पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबैजसो संघ संस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन् ।